Labo owahlatshwa unolwazi ngokufika olandelayo izivakashi, noma ubani nameday indodana yawela phezu phakathi nesonto, ke bayothola iresiphi yethu. Ikhekhe amakhekhe ne ukhilimu akusho zidinga nokunwetshiwe ukuma isitofu noma izithako eziningi noma eziyinkimbinkimbi wekhono Culinary. ngisho umfundi omncane okubhekana nayo. Ngakho uma othile ekunika ukubhaka ikhekhe "Piece of ikhekhe" - ungadikibali ku ukucunula. Lokhu ikhekhe akuyona wabhaka - kuzoba nje.
Ikhekhe ngaphandle baking
Okokuqala cabanga, ngomqondo ongokomfanekiso, iresiphi eyisisekelo. Gingerbread ikhekhe nge ukhilimu omuncu ngokuvamile kwahambisana ubhanana. Nokho, cabangela kubo isithako ezibalulekile akufanele ke - ukwelapha Ungabeka yiluphi uhlobo izithelo. Isimo kuphela - kufanele namanzi. Ifanele intando tangerines kanye amawolintshi, ikiwi izithelo, izithelo, amabhilikosi kanye amapetshisi. Apples nge amagonandoda "umsindo" ngeke zibe zimbi kakhulu. Kuphela ukhilimu zomsebenzi funa: ukupheka ikhekhe elula. Ngoba kudingeka ukhilimu obukhulu. Esikhathini esitolo adingekayo "ukuminyana" ayinakukuthenga, ukuze uzoba evamile 20%, nesisindo: ugcwalise cheesecloth, eligoqiwe izingqimba eziningana, bese efakwa ngesihlungo. C kuthatha cishe 700 ml ingilazi serum. Cream ubambe kangcono ubusuku imbala - kuzokwenza ngempela obukhulu. It is kahle ngesiswebhu nge ingilazi ushukela. isamba okunjalo ukhilimu kwanele bayobhaka iphawundi - okungenani, ngakho uthi iresiphi. Gingerbread ikhekhe nge ukhilimu omuncu uya impela nje: makhukhi usike lengthwise zibe yizicucu ezintathu awele ukhilimu. Ngo bandiswe ngoqwembe ungqimba, phezu - ubhanana tincetu ukusika ... nokunye isinyathelo kuze akukho preform, ukwakha entabeni. Kusukela ngenhla it is wathela noma abafafazwe Uqweqwe ushokoledi, kakhukhunathi, njll Ubusuku ngabunye ofakwe dessert - futhi ungakwazi ukuhalalisela ngosuku lwakho lokuzalwa.
Cream ubisi olujiyile
Njengoba sekushiwo, owokuqala kwaba iresiphi elula. Gingerbread ikhekhe nge ukhilimu omuncu kungaba promazyvat nokuningi okhilimu okhandlayo. Ngokwesibonelo, embizeni ukuxuba-pint nge ephansi fat ukhilimu omuncu ubisi wafingqa futhi ezintathu nezinkezo ujamu ngaphandle uginindela. ubuhlakani Technical: kwenziwa kuphela ngesipuni; ezimweni ezimbi kakhulu - a phehla. Mixer, yebo, usebenza ngokushesha, kodwa ukusetshenziswa kwalo imiphumela ukhilimu uketshezi kakhulu. Leresiphi esebenzisa ama ngendlela ethé ukuhluka kancane ukupheka ikhekhe wamaqebelengwane: esikwa sasivumela amancane, kodwa yinye hhayi ebhidlikayo izicucu. Lezi tincetu afakwa ukhilimu kwesokunxele ke imizuzu embalwa - I-impregnation. ivumelane kakhulu ukuthi ikhekhe ngeke amajikijolo (mhlawumbe fresh, kodwa kungenzeka futhi le jam ke). Gingerbread ungqimba wabeka ingxube nuts akhethiwe ochotshoziwe amajikijolo. Gorka ihora kwesokunxele etafuleni, bese ezintathu kufihlwe abandayo. Ngenxa yokuthi izaqathe uthathe encane, wasimanzisa pretty masinyane.
Chocolate ibhotela ukhilimu
ezinhle Ikakhulukazi naye iqebelengwana ushokoledi amakhekhe. A samuntu olukhethekile elikhuhluziwe ezinjalo banikeza Persimmon ezivuthiwe namantongomane asetshenziswe kanye nobhanana. Umhlangano iyafana iresiphi lokuqala: Gingerbread ipuleti ofakwe cream ezigcotshwe kwabo ukubola ipuleti Persimmon kubo - futhi, Gingerbread, bese banana tincetu. Ngamunye izithelo ungqimba ifafazwa nati. Ukuze ophehliwe njengoba esikhipha uwoyela ezithambile (Paka 200 amagremu) kuthululwe kancane kancane inkomishi yashukela (ukuphehla uyaqhubeka). Lapho pellet siphela ngokuphelele, kancane wengeze ezimbili izinkomishi amafutha ukhilimu omuncu. Ufuna, kanye ukhilimu kwaba ushokoledi - faka ekupheleni ezintathu wezipuni nokhokho oyimpuphu. ikhekhe eligoqiwe wathela nge uqweqwe lukashukela futhi avunyelwe ukuba bame ubusuku nesiqandisi.
Zephyr, Gingerbread ikhekhe
Uma uthanda okujabulisa amnandi kakhulu, ngeke sondelana lo iresiphi: Gingerbread ikhekhe nge cream marshmallow. Cream yisona esikhulunywa abantu abaningi, eziyisisekelo: isigamu ilitha ukhilimu obukhulu, ngesiswebhu nge ushukela ingilazi. Gingerbread kunambitheka kangcono ukuthatha uju, isigamu - omhlophe kanye ushokoledi (lokhu ubuhle). Marshmallow kudingeka umthamo ofanayo, kangakanani baking. Yiqiniso, kudingeka ubhanana. Uma nizizwa nesaba lapho ukuthi kuyoba cloying kakhulu, hlambulula nge tincetu ikiwi. Ukwakhiwa ikhekhe kakade eziwubala: Gingerbread ipuleti poppy ngendlela ukhilimu, izithelo aliveza ngabo, kodwa ke kukhona ungqimba lwebhece. On ke - futhi, izithelo, Gingerbread, plus ubhanana futhi phezulu - we lwebhece.
Uma ungenalo ugcine isikhathi sakho futhi nje amakhukhi, ungenza isikhathi okumnandi, kodwa ngempela oqothulayo ikhekhe. Ukuze-ke 400 amagremu cherry axutshwa nezinkolelo ezimbili wezipuni ushukela; lapho sokukhipha ijusi ngokweqile, berry exutshwe isitashi spoon. Inani elilingana ushokoledi Gingerbread grater bazokwenza lokho nakuBafana. Ucezu ibhotela (80 grams) is bhotela, exutshwe ezintathu amaqanda izikhupha futhi batheleka imvuthuluka Gingerbread. Ukubhaka isidlo uphahlwe ucwecwe, ngoba ezidabula iningi "test", angabekwa futhi kancane wanyathelwa. Three amaprotheni nengxenye inkomishi yashukela kushaywa kuze elithambile, kodwa iphakama esitebeleni. meringue Isigamu basakaza phezu izaqathi. cherry eziphezulu elise lapho ukubola zinsalela meringue. Isimiso sonke is ngokucophelela ivaliwe inhlama esisele - futhi kuhhavini for isigamu sehora. Enzima, kodwa esihlwabusayo kakhulu!
Ukulungiselela yengulube kuhhavini, kanye nokulungiselela yengulube kanye izoso kuhhavini.
Amahhotela ezinconyiwe e Greece (neCorfu)